China Barium chloride rụpụta na ụlọ ọrụ | Ntinye
Ebe na-agbaze: 963 Celsius C (agbanye.)
Ebe esi: 1560 Celsius
Njupụta: 3.856 g / mL na 25 Celsius (agbanye.)
Nchekwa temp. : 2-8 Celsius
Ike ndọda: 3.9
Solubility mmiri: soluble na mmiri na methanol. A naghị edozi na acid, ethanol, acetone na ethyl acetate. Obere soluble na nitric acid na hydrochloric acid.
Kwụsi ike: Stable.
HS Usoro: 2827392000
UN Mba.: 1564
Ọdịdị: ọcha crystalline ntụ ntụ
CAS Mba.: 10326-27-9
Lekpụrụ Molekul: BaCl2 · 2H2O
CAS Mba.: 10361-37-2
Lekpụrụ Molekul: BaCl2
Nkwadebe nke Industrial Barium Chloride
Na-bụ-eji barite dị ka ihe onwunwe nke nwere nnukwu mmiri nke barium sulfate barite, unyi na calcium chloride bụ mbuaha, na calcined iji nweta barium chloride, mmeghachi omume bụ dị ka ndị:
Usoro mmepụta nke Barium chloride anhydrous: Barium chloride dihydrate dị ọkụ karịa 150 ℃ site na akpịrị ịkpọ nkụ iji nweta ngwaahịa barium chloride anhydrous. ya
A pụkwara ịkwadebe Barium chloride site na barium hydroxide ma ọ bụ barium carbonate, a na-ahụ nke ikpeazụ ahụ dị ka ịnweta "Witherite". Salts ndị a bụ isi na-emeghachi barium chloride hydrated. Na ulo oru ulo oru, a na-akwado ya site na usoro nzọụkwụ abụọ
1) Nri Barium, Dihydrate
Mmiri Barum (BaCl. 2H2O) 99.0% nkeji
Strontium (Akwa) 0.45% max
Kalsụl (Ca) 0.036% max
Sulfide (dabere na S) 0,003% max
Mmiri anaghị agbaze 0.05% max
BaCl2 97% nkeji
Kalsụl (Ca) 0.9% max
Strontium (Akwa) 0.2% kacha
Mmiri 0.3% max
Mmiri anaghị agbaze 0,5% max
Nwee ihe karịrị afọ 10 ahụmịhe ọkachamara na mmepụta nke Sodium Hydrosulfite;
1) Barium Chloride, dị ka ọnụ ala, nnu soluble nke barium, barium chloride na-achọta ngwa sara mbara na laabu. A na-ejikarị ya dị ka ule maka ion sulfate.
2) A na-ejikarị Barium chloride eme ihe maka ọgwụgwọ ọkụ nke ọla, mmepụta nnu nke barium, ngwa elektrọnik, ma jiri ya mee ihe dị nro.
3) Ọ ga-eji dị ka dehydrating gị n'ụlọnga na analysis reagents, ọ na-eji maka machining okpomọkụ ọgwụgwọ.
4) A na-ejikarị ya dị ka ule maka ion sulfate.
5) Na ụlọ ọrụ, barium chloride na-bụ-eji na ọcha nke brine ngwọta na caustic chlorine osisi na-na imewe nke okpomọkụ ọgwụgwọ salts, bụrụ hardening nke ígwè.
6) Na imepụta ihe pigments, yana n’ichepụta nnu ndị ọzọ.
7) A na-eji BaCl2 eme oku iji nye agba odo na-acha akwụkwọ ndụ. Otú ọ dị, nsí ya na-egbochi njedebe ya.
8) A na-ejikwa Barium Chloride (ya na Hydrochloric acid) dị ka nnwale maka sulfates. Mgbe kemịkal abụọ a jikọtara ya na nnu sulfate, ụdị ọcha na-acha ọcha, nke bụ barium sulfate.
9) Maka mmepụta nke ndị nrụgide PVC, ndị na-ete mmanụ, barium chromate na barium fluoride.
10) Maka imalite obi na akwara ndi ọzọ maka ọgwụgwọ.
11) N'ihi na-eme agba kinescope iko ceramik.
12) N'ime ụlọ ọrụ, barium chloride bụ nke a na-ejikarị eme ihe na njikọta nke pigments na imepụta rodenticides na ọgwụ.
13) Dịka ọfụfụ na imepụta nke magnesium metal.
14) Na imepụta soda caustic, polymer, na stabilizers.
Njirimara ihe egwuBarium chloride anaghị ere ere. Ọ dị oke nsi. Mgbe kọntaktị boron trifluoride, mmeghachi omume ike nwere ike ime. Ikpo ọkụ ma ọ bụ nke iku ume nwere ike ibute nsị, ọ kachasị site na akụkụ iku ume na tract digestive iji wakpo ahụ mmadụ, ọ ga-ebute nsị na ọnya na-ere ọkụ, afọ mgbu, mkpịsị ụkwụ, ọgbụgbọ, ọgbụgbọ, afọ ọsịsa, ọbara mgbali elu, enweghị ụlọ ọrụ ọka iwu. , cramps, otutu ajirija oyi, ike akwara na-adịghị ike, ije, ọhụụ na nsogbu okwu, nsogbu iku ume, dizziness, tinnitus, nsụhọ na-apụtakarị. N'okwu ndị siri ike, ọ nwere ike ibute ọnwụ mberede. Iri Barium nwere ike ime ka akwara nwee ike ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịrịa ọrịa. Rat ọnụ LD50150mg / kg, oke peritoneal LD5054mg / kg, oke na-agbanye LD5020mg / kg, ọnụ na nkịta LD5090mg / kg.
Ntụle mbụ: Mgbe anụ ahụ kpọtụrụ ya, jiri mmiri sachaa ya, were ncha saa ya nke ọma. Mgbe anya na kọntaktị, na-agbanye mmiri na mmiri. Ya mere, ka ndị ọrịa na-ekuru uzuzu kwesịrị ịhapụ ebe mmetọ ahụ, kwaga ebe ikuku dị mma, zuo ike ma kpoo ọkụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a kwesịrị iku ume iku ume, chọọ nlekọta ahụike. Mgbe iloda ya, kpochapu ọnụ ozugbo, a ga-eji mmiri ọkụ ma ọ bụ 5% sodium hydrosulfite were catharsis. Ọbụna na-elo ihe karịrị 6h, lavage gastric dịkwa mkpa. A na-eji nwayọọ nwayọọ were infravenous infusion na 1% sodium sulfate nke 500ml ~ 1 000ml, a pụkwara iji ọgwụ intravenous ọgwụ were 10% sodium thiosulfate nke 10ml ~ 20ml. Potassium na ọgwụ mgbaàmà kwesịrị ịrụ.
Soluble barium salts nke barium chloride na-etinye uche ngwa ngwa, yabụ ihe mgbaàmà ahụ na-eto ngwa ngwa, n'oge ọ bụla ijide obi ma ọ bụ mkpọnwụ akwara iku ume nwere ike ibute ọnwụ. Ya mere, enyemaka nke mbu aghaghi imegide elekere.
Solubility na mmiri Grams nke na-agbaze na 100 ml mmiri na okpomọkụ dị iche iche (℃):
Ogwu mmikpo rie barium chloride dihydrate.
Ihe egwu na nchekwa ozi: Udi: nsi.
Nkọwa nsị: oke nsí.
Nnukwu egbu egbu-oke LD50: 118 mg / kg; Oral-Mouse LD50: 150 mg / n'arọ
Njirimara ihe odachi nwere ike ibughari: Ọ bụ nke na-enweghị ike ire ọkụ; ọkụ na anwụrụ ọkụ chloride na-egbu egbu nwere barium.
Njirimara nchekwa: Treasury ventilashion obere ihicha; ekwesiri idobe ya iche iche na ihe ntinye nri.
Na-ekpochapụ mmadụ: Mmiri, carbon dioxide, ala akọrọ, aja aja.
Kpụrụ Omume: TLV-TWA 0.5 mg (barium) / cubic mita; STEL 1.5 mg (barium) / cubic mita.
Barium Chloride nwere ike ime ihe ike na BrF3 na 2-furan percarboxylic acid n'ụdị anhydrous. Ihe ize ndụ Mmetụta nke 0.8 g nwere ike ịnwụ.
Ihe Mberede Ọkụ:
Ihe na-anaghị ere ọkụ, ihe n'onwe ya anaghị ere ọkụ mana ọ nwere ike ire ere n'elu ikpo ọkụ iji mepụta anwụ anwụ na / ma ọ bụ anwụrụ ọkụ. Arefọdụ bụ ndị na-ekpo ekpo ọkụ nwere ike ịgbanye combustible (osisi, akwụkwọ, mmanụ, akwa, wdg). Contactkpọtụrụ ọla nwere ike ịgbalite ikuku hydrogen na-enwu ọkụ. Ihe nwere ike ịgbawa mgbe iwe dị ọkụ.
Koodu Mberede: T, Xi, Xn
Nkwupụta Egwu: 22-25-20-36 / 37 / 38-36 / 38-36
Nkwupụta Nchedo: 45-36-26-36 / 37/39
UN. Ogbogu Okonji
HS Usoro: 2827 39 85
Ihe Mberede: 6.1
Ihe ojoo ojoo: 10361-37-2 (ihe ojoo ojoo
Mgbu LD50 na-egbu egbu ọnụ na oke oyibo: 118 mg / kg
A nsi site ingestion, subcutaneous, intravenous, na intraperitoneal ụzọ gasị. Inhalation absorption nke barium chloride nhata 60-80%; ịmịkọrọ ọnụ bụ 10-30%. Ihe omumu omumu. A kọọrọ data mutation. Leekwa BARIUM COMPOUNDS (soluble). Mgbe ewe iwe ya decomposition ọ emits nsí anwụrụ ọkụ nke Cl-.
Nke gara aga: Sodium Hydrosulfite
Nri Nri Barium
Calcium Bromide Ngwọta, Hydrosulfite, Calcium Bromide Anhydrous, Calcium Bromide mmiri mmiri, Hydrosulfite De Sodium, Natrium Hydrosulfite,